Mas,uuliyiin ka tirsan Dowlada Belguim-ka oo diiday ka qeybgal... | Universal Somali TV
Mas,uuliyiin ka tirsan Dowlada Belguim-ka oo diiday ka qeybgalka shir ka dhici lahaa Israel
Laba xubnood oo ka socda Ismaamulada hoose ee Belgium-ka ayaa isaga baxay shir looga hadlayo ganacsiga oo ka dhici lahaa Israel iyadoo talaabadan ay soo dhaweeyeen hey,adaha iyo dhaqdhaqaaqyada ka soo horjeeda Israel oo loo yaqaan (BDS).
Xoghayaha ganacsiga dibada ee Ismaamulka Brussels Pascal Smet, ayaa ku dhawaaqay go,aankan xilli uu la hadlayay maalintii Khamiista warbaahinta ku hadasha afka dowlada Faransiiska ee loo yaqaan RTBF.
Ra'isul Wasaaraha gobolka Wallonia Elio Di Rupo, iyo ra'isul wasaarihii hore ee Belgium-ka ayaa isaga baxay wafuuda ka qeyb galeysa shirka ganacsiga ee ka dhacaya Israel bisha soo aadan ee December.
Mas,uuliyiintan ayaa ku macneeyay talaabadan sababo la xiriira hormar la,aanta laga gaaray dhanka Nabada bariga dhexe iyo xadgudubyada Isreal ka wado dhulka Falastiin oo ay ku tilmaameen mid jabinaya sharuucda caalamiga ah ee Geneva.
Arintaan ayaa ka danbeysay kadib markii xukuumada Tell Aviv ay xanibaad ku soo rogtay hey,adaha iyo shaqsiyaadka taageera hey,ado u ololeeya xuquuqda Falastiin.
Dhadhaqaaqan ka kooban 170 hey,adood Falastiini ah oo la aas aasay sanadkii 2005-tii ayaa noqday mid caalami ah waxaana looga soo horjeeda dhibaatada iyo xadgudubyada Israel ay ku heyso dhulka Falastiin waxaana marwalba ay soo saaraan bayaan caalami ah oo ka dhan ah Israel.
Sanadkii la soo dhaafay ayaa 20 hey,adood laga mamnuucay in ay gudaha u galaan daanta galbeed sababo la xiriira taageeradooda ka dhanka ah Israel waxaana wasaarada Istaraatiijiyada xukuumada Tel Aviv loo qoondeeyay 36 million si ay ula dagaalanto Ururadaan.
Kan-xigaMareykanka oo lagu dhaliilay xayiraad...
Kan-horeXildhibaan Aadan Barre oo ka hadlay B...
61,463,139 unique visits